एनआरएनए निर्वाचन: ४१ पदको लागि ७६ जनाको उम्मेदवारी,को-को भए निर्विरोध ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रकाशित मिति: २९ आश्विन २०७६, बुधबार October 16, 2019
काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनए को आगामी कार्यकाल निर्वाचन हुदैछ । संघको ४१ पदमा ७६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। ४२ पदको लागि निर्वाचन गर्न थालिएकोमा एक पदको लागि उम्मेदवारी परेको छ भने बाँकी ४१ पदको लागि ७६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ। अध्यक्षमा कुमार पन्त र कुल आचार्यले उम्मेदवारी दिएका छन्। चार उपाध्यक्षको लागि नौ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा छ।
जसमा हिक्मतबहादुर थापा, किरणबिक्रिम थापा, अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्रबहादुर भाट, बद्री केसी, मन केसी, धर्मराज अधिकारी, शोनाम लामा र डा। केशव पौडेलको उम्मेदवारी परेको छ भने महिला उपाध्यक्षमा सोपिला राजभण्डारी र रोविना थापाको उम्मेदवारी परेको छ। महासचिवमा जानकी गुरुङ र डा। हेमराज शर्माको उम्मेदवारी परेको छ।
कोको भए निर्विरोध निर्वाचित ?
यस्तै, संघमा निर्विरोध निर्वाचित हुनेमा युरोपबाट क्षेत्रीय युवा संयोजकमा टंककुमार ठाकुर, युरोपबाट नै क्षेत्रीय महिला संयोजक कुमारीयोगीता थापा, क्षेत्रीय युवा संयोजक ओसेनियाबाट जानकी पौडेल, क्षेत्रीय युवा संयोजक मध्यपूर्व बाट राजु रेग्मी निर्वाचित भएका छन्।
त्यस्तै क्षेत्रीय महिला संयोजक मध्यपूर्व सुमित्रादेवी पौडेल, क्षेत्रीय उपसंयोकज मध्यपूर्वबाट राजेन्द्र अर्याल र मनोजकुमार श्रेष्ठ, क्षेत्रीय संयोजक मध्यपूर्वबाट प्रविन गुरुङ, क्षेत्रीय युवा संयोजक अमेरिकाज्बाट विमल सापकोटा, क्षेत्रीय महिला संयोजक अफ्रिकाबाट मनकला विष्ट र क्षेत्रीय संयोजक अफ्रिकाबाट रोशन थापा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । सम्मवन्धित कोटमा भन्दा धेरै उम्मेदवारी नपरेपछि उनीहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।
बारा आँधीः ६ हजार पीडित राहत र पुनः स्थापनाको पर्खाइमा
बारा । बारा र पर्सामा आएको भीषण हुरीबाट प्रभावित ६ हजार पीडितलाई राहत र पुनःस्थापनामा गम्भीर समस्या देखिएको […]
अपडेटः महाकालीमा पानीको बहाव पुनः बढ्यो, हाल दुई लाख २५ हजार क्युसेक
असार ११। भीमदत्तनगर, महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्दै गएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले दिएको […]
काठमाडौं । मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी नेताहरू संसदीय दलको नेता बन्ने दौडमा लागेका छन् । सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा […]
काठमाडौँ । चर्चित नायिका रेखा थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेकी छन्। सोमबार आयोजित एक […]
‘टोले गुण्डा’हरू कटुवा पेस्तोल र गोली सहित पक्राउ
साउन ९, काठमाडौं । प्रहरीले चेकजाँचका क्रममा साउन ८ गते आइतबार काठमाडौंको सुकेधाराबाट तीन जना ‘टोले […]